အစက တို့နှစ်ယောက် မတွေ့ခဲ့ရင် အကောင်းသား …. - Myanmar Daily Time
[ July 17, 2019 ] ဘဝကံကြမ္မာဆိုးကို ရင်ဆိုင်ရင်း.. မိဘကို လုပ်ကြွေးနေတဲ့ ကောင်မလေး	ကြားသိရသမျှ
[ July 17, 2019 ] တဖက်သက် အချစ်ဆိုတာက အရမ်း ခံစားရပါတယ်..	RELATIONSHIP
[ July 17, 2019 ] သင်ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ချင်းစာ ကြည့်လိုက်ပါ.. အနိုင်မယူပါနဲ့	LIFESTYLE
[ July 17, 2019 ] ညဖက်ပြည်သူများ အိပ်ချိန် ကားမောင်း သောင်းကျန်းနေသူများ ဝိုင်းသမခံရ(ရုပ်သံ)	NEWS
[ July 17, 2019 ] ကျွန်​မချစ်​တဲ့​ ယောက်ျားဆိုတာ ကျွန်​မအ​ပေါ် အနိုင်​မယူဘဲ နားလည်​မှု​ ပေးနိုင်​ရမယ်​	LIFESTYLE
HomeLIFESTYLEအစက တို့နှစ်ယောက် မတွေ့ခဲ့ရင် အကောင်းသား ….
အစက တို့နှစ်ယောက် မတွေ့ခဲ့ရင် အကောင်းသား ….
July 9, 2019 admin LIFESTYLE 0
” ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ ကံ ပါမလာဘူး ဆိုရင် စွန့်လွှတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ ” တဲ့ …..
ရယူပြီးမှ ပြန်ပေးလိုက် ရတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဘဝမှာ ခံရ အခက်ခဲဆုံး ဆိုတာ ကိုယ့်တိုင် ကြုံဖူးမှ သိတာ ။ ဒါကြောင့် တချို့ ကံတရားတွေက အစထဲက လွဲဖယ်သွား ခဲ့ရင်လည်း အကောင်းသား ။
” ရှေးဘဝက ရေစက်သာ ရှိရင် ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးဝေး ဆုံနိုင်တယ် ” တဲ့ …..
ဆုံခဲ့ရ ပြီးမှ ဝေးကွာသွားရတဲ့ သံယောဇဉ်မျိုး ဘဝမှာ လက်ခံဖို့ မလွယ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ မမေ့နိုင်တဲ့ သူမျိုးတွေ အတွက် သိပ်ကို ခံရခက် လွန်းတယ် ။ ဒါကြောင့် မဆုံနိုင်မှန်း သိရဲ့သားနဲ့ အစထဲက မတွေ့ခဲ့ရရင် အကောင်းသား ။
ရှေးဘဝက ရေစက်သာ ရှိရင် ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးဝေး ဆုံနိုင်တယ်
” နားမလည်ချင် တော့တဲ့ တနေ့ ဥပေက္ခာပြု နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ ” တဲ့ …..
ပေးဆပ်ခဲ့ ရတဲ့ အရင်းအနှီးတွေက အချိန်တွေမို့ လွယ်လွယ်နဲ့ သင်ပုန်းချေဖို့ ဆိုတာ တကယ့်ကို မလွယ်ကူလှဘူး ။ ပြုသူနဲ့ ခံရသူက ဘယ်သူ ပိုနာကျင်စေရ ပါသလဲ ။ ဒါကြောင့် တချို့ ပတ်သတ်မှု တွေက အစထဲ မရင်းနှီး ၊ မဆက်ဆံခဲ့ ရရင် အကောင်းသား ။
” မမေ့နိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှ ခွင့်လွတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ ” တဲ့ …..
သူပျော်ပါစေ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လွတ်တင်ခဲ့ ဖူးတဲ့ မိုးပျံဘောလုံးလေးလို သူကိုယ့်အနားက အဝေးကို ရောက်သွားတိုင်း ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှု တွေလည်း ပါသွားခဲ့ရတဲ့ ဒဏ်ရာမျိုး ပေးဆပ်ဖူးသူတိုင်း ကြုံဖူးမှာပါ ။ ဒါကြောင့် တချို့ အရာတွေက သူပျော်ပါစေ ဆိုပြီး ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုတွေကို လမ်းခင်းပေးခဲ့ ရတဲ့ အဖြစ်တွေ အစထဲက အလေးမထားမိ ခဲ့ရင် အကောင်းသား ။
” ကိုယ့်ကို စိမ်းကားသွားတဲ့ သူကို သူစိမ်း တယောက်လို သဘောထားပါ ” တဲ့ …..
ပစ္စည်း အရာဝတ္တုတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့နိုင်ပေမယ့် စိတ်ထဲက အမှတ်တရ တွေကိုတော့ အချိန်တွေအများကြီးရင်းပြီးမှ မေ့ဖျောက် ရတာမို့ အစွဲအလန်းကြီးမိ သူတိုင်း ခံစားဖူးမှာပါ ။ ဒါကြောင့် သူစိမ်းဆိုတာ တစ်ချိန်က အရင်းအနှီးဆုံး သူတွေကမှ ဖြစ်တည် သွားတတ်တာ မျိုးမို့ အစထဲက ကိုယ့်ဘဝထဲ ဝင်မလာခဲ့ရင်လည်း အကောင်းသား ။
” ပိုငျဆိုငျရဖို့ ကံ ပါမလာဘူး ဆိုရငျ စှနျ့လှတျနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ ” တဲ့ …..
ရယူပွီးမှ ပွနျပေးလိုကျ ရတဲ့ ခံစားခကျြမြိုး ဘဝမှာ ခံရ အခကျခဲဆုံး ဆိုတာ ကိုယျ့တိုငျ ကွုံဖူးမှ သိတာ ။ ဒါကွောငျ့ တခြို့ ကံတရားတှကေ အစထဲက လှဲဖယျသှား ခဲ့ရငျလညျး အကောငျးသား ။
” ရှေးဘဝက ရစေကျသာ ရှိရငျ ဘယျလောကျပဲ ဝေးဝေး ဆုံနိုငျတယျ ” တဲ့ …..
ဆုံခဲ့ရ ပွီးမှ ဝေးကှာသှားရတဲ့ သံယောဇဉျမြိုး ဘဝမှာ လကျခံဖို့ မလှယျနိုငျဘူး ဆိုတာ မမနေို့ငျတဲ့ သူမြိုးတှေ အတှကျ သိပျကို ခံရခကျ လှနျးတယျ ။ ဒါကွောငျ့ မဆုံနိုငျမှနျး သိရဲ့သားနဲ့ အစထဲက မတှခေဲ့ရရငျ အကောငျးသား ။
ရှေးဘဝက ရစေကျသာ ရှိရငျ ဘယျလောကျပဲ ဝေးဝေး ဆုံနိုငျတယျ
” နားမလညျခငျြ တော့တဲ့ တနေ့ ဥပက်ေခာပွု နိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ ” တဲ့ …..
ပေးဆပျခဲ့ ရတဲ့ အရငျးအနှီးတှကေ အခြိနျတှမေို့ လှယျလှယျနဲ့ သငျပုနျးခဖြေို့ ဆိုတာ တကယျ့ကို မလှယျကူလှဘူး ။ ပွုသူနဲ့ ခံရသူက ဘယျသူ ပိုနာကငျြစရေ ပါသလဲ ။ ဒါကွောငျ့ တခြို့ ပတျသတျမှု တှကေ အစထဲ မရငျးနှီး ၊ မဆကျဆံခဲ့ ရရငျ အကောငျးသား ။
” မမနေို့ငျခဲ့ရငျတောငျမှ ခှငျ့လှတျနိုငျဖို့ ကွိုးစားပါ ” တဲ့ …..
သူပြျောပါစေ ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ လှတျတငျခဲ့ ဖူးတဲ့ မိုးပြံဘောလုံးလေးလို သူကိုယျ့အနားက အဝေးကို ရောကျသှားတိုငျး ကိုယျ့ပြျောရှငျမှု တှလေညျး ပါသှားခဲ့ရတဲ့ ဒဏျရာမြိုး ပေးဆပျဖူးသူတိုငျး ကွုံဖူးမှာပါ ။ ဒါကွောငျ့ တခြို့ အရာတှကေ သူပြျောပါစေ ဆိုပွီး ကိုယျ့ပြျောရှငျမှုတှကေို လမျးခငျးပေးခဲ့ ရတဲ့ အဖွဈတှေ အစထဲက အလေးမထားမိ ခဲ့ရငျ အကောငျးသား ။
” ကိုယျ့ကို စိမျးကားသှားတဲ့ သူကို သူစိမျး တယောကျလို သဘောထားပါ ” တဲ့ …..
ပစ်စညျး အရာဝတ်တုတှကေို လှယျလှယျနဲ့ မနေို့ငျပမေယျ့ စိတျထဲက အမှတျတရ တှကေိုတော့ အခြိနျတှအေမြားကွီးရငျးပွီးမှ မဖြေ့ောကျ ရတာမို့ အစှဲအလနျးကွီးမိ သူတိုငျး ခံစားဖူးမှာပါ ။ ဒါကွောငျ့ သူစိမျးဆိုတာ တဈခြိနျက အရငျးအနှီးဆုံး သူတှကေမှ ဖွဈတညျ သှားတတျတာ မြိုးမို့ အစထဲက ကိုယျ့ဘဝထဲ ဝငျမလာခဲ့ရငျလညျး အကောငျးသား ။
“ဆံပင်ဖြူတွေ” ကို တစ်ခါပြန်နက်စေမယ့် ကြောင်လျှာသီး အစွမ်း…!
ဆီးရောဂါသမားများအတွက် အဖိုးတန် မျိုးမှန် ဆေးနည်းလေး ကုသိုလ်ဖြစ် မျှဝေလိုက်ပါတယ်
သူေ ယာင်မယ်သီးလေး များအကြောင်း သိကောင်းစရာ (ရုပ်/သံ) !!!
ကလေးများကို ခိုးယူပြီး ရက်စက်စွာ ခိုင်းစားသူကို ဖမ်းဆီးရမိ
နတ်သက်ကြွေလာသလား မှတ်ရစေအောင် ကမ္ဘာကျော် Brand တွေနဲ့ ဝန်းရံထားတဲ့ မိုးဟေကိုရဲ့ အမိုက်တကာ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
သင်သည် စနေနေ့မှာ မွေးခဲ့သော်…. စနေသားသမီးများ အတွက်
Users Yesterday : 1729
This Month : 24086
This Year : 164406
Total Users : 190291
Views Today : 3798
Total views : 574484